झापाको हल्दिबारीका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको विवादले तीन महिनादेखि काम प्रभावित - Arunkhabar.com
प्रकाशित : २१ आश्विन २०७७, बुधबार १८:३०
विराटनगर २१ असोज । झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पार्टीगत विवादले गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामकाज तीन महिनादेखि प्रभावित भएको छ । दुईजनाको विवादले गाउँपालिकाका कर्मचारीसहित शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीले तीन महिनाको तलब भत्ता पाएका छैन ।
साउन, भदौ र असोज (दसैं पेस्की) सहितको तलब भत्ता माग गर्दै गाउँपालिकाका कर्मचारीले पटक पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लिखित रूपमै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तरपनि कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
माग सम्बोधन नभएपछि कर्मचारीले मंगलबारदेखि सेवा प्रवाह अनिश्चितकालकालागि ठप्प पारेका छन् । कर्मचारकीको आन्दोलनले गाउँपालिकाको कामकाज थप प्रभावित बन्न पुगेको छ । गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभाको पहिलो बैठक बिथोलिएपछि दुई पदाधिकारीबिच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयमा अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङदेन र उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरीबीच बढेको विवादले समस्या भएको हो ।
नयाँ दिल्लीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिसमा विराटनगरका रेहान्तले खेल्ने
प्रदेश नं. १ मा १ हजार थान पीपीई आईपुग्यो
प्रदेश नम्वर १ का समृद्धिका आधारहरु
Erectalis for sale, acquire clomid. महेन्द्र बिष्ट विराटनगर, ९ पुस । प्राकृतिक श्रोत साधन र...
प्रदेश १ मा १ सय ५५ संक्रमित थपिए
विराटनगर, २४ भदौ । प्रदेश १ मा आज १ सय ५५ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्...